Yaziwa ngezakhiwo zayo ze-aphrodisiac, i-ginger ithuthukisa ukugaya - i-Afrikhepri Fondation
Li-ginger yaziwa kakhulu ngemiphumela yayo ye-aphrodisiac namandla ayo okuvuselela ubulili. Kepha lobu buntu buqhelelene nokuba kuphela. Ujinja ngempela unentambo engaphezu kweyodwa yomnsalo wakhe. Ukugaya okwenziwe ngcono, izakhiwo ezishisa amafutha. Enye yezimpawu ezinhle kakhulu ezingekhohlwe kakhulu ze-ginger ngokuqinisekile yilezo eziphathelene nokwenza ngcono ukugaya.
Ngempela, ngokwezifundo ezithile, impande inezici ezisiza ukusheshisa imetabolism. Ngaphezu kwalokho, lesi sitshalo sibangela umuzwa wokwaneliseka kumuntu odla njalo. Ibuye ibe nezindawo ezishisa ukushisa, kunconywa ukuhlanzeka okuthile kokudla.
Ucwaningo lwezesayensi luye lwabonisa ukuthi i-ginger isisiza ukugcina imithi yamathumbu emathunjini esimweni esihle, ukugaya amafutha nokuzola noma ukukhulula indlela yokugaya. Ku-1999, i-World Health Organization ibone ukuthi i-rhizome ye-ginger iyasiza ukulwa nesicanucanu nokuhlanza kokukhulelwa.
Eqinisweni, i-gingerols kanye ne-shogaols eziqukethwe kulesi sitshalo zidlala indima ebalulekile empilweni ye-antiemetic, ikakhulukazi ngokuthatha ukunciphisa ukuhamba kwesisu. Ngakho-ke impande ingashintsha ngokucophelela i-vitamin B6 enqunyelwe abesifazane besifazane abakhulelwe. I-ginger nayo inezakhiwo eziwusizo kakhulu zokulwa nokuvuvukala. Ikakhulukazi kulabo abafuna ukunciphisa umzimba, ngaphandle kokudla kwe-draconian futhi ngaphandle kwemiphumela emibi. Kunconywa ngokukhethekile ukunciphisa isisu, ngokuvamile esithinteka ukuvuvukala noma ukugaya okungenamsoco.
Futhi kusiza ukwehlisa imfiva, ukulwa nobuhlungu futhi kunezindawo zokulwa namagciwane kanye ne-antiviral. Kubuye futhi ngaphezu kwakho konke umzimba omuhle kakhulu okhuthazayo futhi ovuselelayo. Ngaphezu kwalokho, izimfanelo zayo ze-aphrodisiac zivela ekukhoneni kwayo umzimba wonke.
Ukusetshenziswa kwe-ginger kubuya ngaphezulu kweminyaka engu-5000. Ngenye yezitshalo ezisetshenzisiwe kakhulu kumuthi wase-Ayurvedic waseNdiya. Futhi esetshenziselwa imithi ye-herbal, i-ginger isinconywa ukungahambi kahle kokugaya ukudla, ukungabi namandla, amandla noma ukulwa nezifo ezehlukene.
Namuhla, lesi sitshalo sibhekene nezifundo ikakhulukazi ngamakhono awo angaphikisana nomdlavuza. I-Ginger, umthombo wamaminerali namavithamini
I-Ginger icebile kumaminerali. Iqukethe ama-manganese, i-phosphorus ne-magnesium. Kodwa futhi i-calcium, i-sodium nensimbi. Kubuye futhi umthombo wamavithamini, ngoba aqukethe amavithamini B1, B2 futhi ikakhulukazi i-vitamin B3. I-ginger esisha, okwamanje, iqukethe i-vitamin C, kodwa uma isomile, le vithamini iyanyamalala.
Okokugcina, i-rhizome ye-ginger (ngaphansi komhlaba ingxenye ye-stem) icebile kakhulu kumatashi. Ibuye ibe namafutha ayo abalulekile, kodwa futhi i-lipids, amaprotheni nama-carbohydrate. Ukusebenzisa i-ginger njalo kulungile empilweni yakho. Futhi ikakhulukazi, uma ubhekana nazo nezinye izinongo ezifana ne-turmeric nesinamoni.
Ungayidla kanjani i-ginger?
Okuhle ukuthatha amagremu angu-2 5 we-ginger rhizome (omisiwe, ngakho) ahlukaniswe ngama-2 noma izikhathi ezingu-3 ngosuku.
Kodwa ungayidla njengetiye le-herbal, umama we-tincture, iziphuzo zamandla noma ugayiwe.
I-Ginger Extract 600mg - Isisusa Esiphakeme Sokugcotshwa Kwama-20: 1 - Ingcambu Yejinja - Ilungele Abasebenza Ngemifino - Ithebula le-90 (Amathebula ama-3 izinyanga) kusuka kuMklamo Womhlaba
20,97€ kukhona kusitoki
1 okusha kusuka ku-20,97 €
Thenga i-20,97 €
kusukela ngo-Agasti 4, 2020 6:06
UKUHLELWA & KAKHULU! Izingcambu zeGinger Zonke, Zomile Futhi Zigcwele Phezulu. Sebenzisa njengengxenye yokudla okulinganiselayo.
AMANDLA! Amathebhulethi weGinger anamandla kakhulu emakethe.
MADE E-EU! Ujinja wenziwa e-EU kuya kumazinga aphezulu kakhulu. Kungaphansi kwezilawuli zekhwalithi eziqine kakhulu nezilawuli eziqhubekayo ngamahholo wokuhlola azimele. Sinikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esiyi-100% uma amakhasimende ethu engagculisekile, ngakho-ke kufanelekile ukuzama.
KUNGANI UMHLANGANO WEZWE EMHLABENI? I-Earths Design ibinikela imikhiqizo ephezulu kakhulu yekhwalithi yeminyaka engaphezu kwengu-8. Sandisa uhla lwethu cishe njalo ngeviki futhi sikunikeza izithasiselo zokudla ngenani ELIHLE LEMALI.
I-La griotique - u-Touré Aboubakar Cyprien